Inona no atao hoe html6? | Famoronana an-tserasera
Nipoitra tamin'ny taona 90 ny HTML, nivoatra mandra-pahatongan'ny dikan-teny HTML5, izay fantatsika ankehitriny. Sahala amin'ny pejin-tranonkala, mivoatra ny fiteniny, noho izany dia ilaina ny fanavaozam-baovao mba hahombiazan'ny fampivoarana tranonkala mba hahomby kokoa sy mivaingana. Ity no tianao hotratrarina amin'ny dikan-teny farany amin'ny HTML5, fantatra kokoa amin'ny hoe HTML6. Na dia tsy mbola fantatra aza ny datin'ny famoahana eny an-tsena, misy ny fiovana mety ho fantatra sy intuited.
Ao amin'ny paositra anio dia milaza aminao momba ny HTML6 izahay, ireo toetra izay hasehony, ireo fepetra ilaina ahafahana mampiasa azy ary ireo fiovana fantatra hatreto, na dia mety hiova aza izany mandra-pivoakany manaraka.
1 Inona ny HTML6?
1.1 HTML6 Features
1.2 HTML6 fepetra
Inona ny HTML6?
HTML (HyperTextMarkup Language) na fantatra amin'ny anarana hoe hypertext markup language, dia manondro ny fiteny marika ho an'ny famolavolana pejy web. Ny ataon'ity fiteny ity dia mamaritra rafitra fototra sy kaody (HTML), hamaritana ny votoatin'ny pejy web toy ny lahatsoratra, sary, sns. Ny mpitety tranonkala rehetra dia mampiasa ity maodely ity ho fiteny hanehoana pejy web.
Ny fiteny HTML dia mifototra amin'ny fanavahana. Ho an'ny fahatakaranao, raha te-hanampy singa ivelany amin'ny pejin-tranonkala ianao, dia ilaina ny manondro ny toerana misy an'io singa io amin'ny alàlan'ny lahatsoratra. Noho izany, ny firafitry ny pejin-tranonkala dia hanana lahatsoratra ihany. Amin'ny maha fenitra azy, ny tadiavin'ny HTML dia ny hoe na inona na inona navigateur, ny pejy web rehetra dia azo adika amin'ny navigateur rehetra.
Tamin'ny taona 2014, tonga teny an-tsena ny HTML5, izay iray amin'ireo teknolojian'ny tranonkala malaza indrindra amin'izao fotoana izao. Saingy hatramin'izay dia tsy nisy fanavaozana tonga raha tsy fantatra fa havoaka tsy ho ela eny an-tsena ny HTML6. Noho izany, HTML6 no kinova HTML5 nohavaozina. Amin'ny ankapobeny, hanana endri-javatra mandroso kokoa miorina amin'ny fiarovana na fanehoana marika, ankoatra ny hafa.
mifanentana: mifanaraka amin'ny dikan-teny teo aloha izy io. Izany dia noho ny OOXML (Office Open XML) izay hikarakara ny ampahany serialization.
famolavolana: Ity dikan-teny vaovao ity dia afaka manohana HTML CSS4, izay hahatonga ny endrika sary ho an'ny pejy web ho mahasarika kokoa.
Fifindra-monina mora: Ny mpamorona dia afaka mandefa ny antontan-taratasiny taloha avy amin'ny HTML4 mankany HTML6 ary ny mifamadika amin'izany.
Syntax: Ny HTML6 dia tsy tapaka amin'ny resaka syntax level dia azo faritana amin'ny andalana 10 eo ho eo.
Ny kinova farany an'ny HTML5 mitaky ny havaozina amin'ny kinova farany ny mpitety tranonkala. Eny, ity dikan-teny ity dia manome laharam-pahamehana ny fiarovana. Ny fitazonana ny fanavaozana ny mpitety tranonkalanao dia hanampy ity fiteny ity hitazona ireo endri-javatra mifameno rehetra ao aminy. Na inona na inona navigateur ampiasainao, na Firefox, Chrome, Opera, Safari na hafa fantatrao, dia tsy maintsy manaraka ny vaovao farany ianao mba hanomezana ny fampisehoana tsara indrindra amin'ny HTML6.
Ireto ny sasany amin'ireo endri-javatra izay hananan'ny HTML6, satria tsy mbola navoaka izy, dia mety hisy fiovana mandra-pahatongan'ny famoahana azy any aoriana.
Fampidirana fakan-tsary: HTML6 dia manasongadina sary na horonan-tsary, manamora ny fidirana amin'ny sary sy ny fitahirizana solosaina ho an'ny fanaraha-maso fakantsary tsara kokoa sy ny tahan'ny fitiliana tsara kokoa.
fanamarinana: Ny navigateur dia tsy maintsy manome fanamarinana matanjaka avy hatrany rehefa miditra amin'ny dikan-teny HTML vaovao. Amin'ny alàlan'ny fiantohana ny fahamendrehan'ny rindrambaiko ihany no ahafahanao manatsara ny fiasan'ny tranokala sy ny navigateur.
Library: Ny ankamaroan'ny tranokala dia mampiasa tranomboky JS voatahiry, mba hanafainganana ny fizotran'ny fampivoarana fampiharana amin'ny Internet.
Baiko: Ny iray amin'ireo fiovana andrasana dia eo amin'ny resaka fizarana ny firafitry ny horonan-tsary amin'ny pejy web.
Annotations: Araka ny efa voalazantsika teo aloha, ny rafitra HTML dia mitaky fanamarihana manokana amin'ny teny, andian-teny ary fehintsoratra.
microformats: hatsaraina ny mari-pamantarana mahazatra, satria manatsara ny kalitaon'ny pejy web ireo. Ny mpamorona tranonkala dia afaka mamaritra daty, toerana misy HTML6.
Sary mifanentana: Eo anelanelan'ny terminal samihafa dia hiova ny haben'ny piksel. Ity fanavaozana nohatsaraina ity dia afaka manondro ny haben'ny sary sy mamaha ny olana amin'ny sary.
HTML6 dia tsy mbola tena fanavaozana ny HTML5, noho izany tsy farany ireo fanovana sy fepetra ireo, na dia nampidirina aza ny fanavaozam-baovao sasany, ny sisa amin'ny fanovana dia faminaniana tsotra fotsiny momba ny mety ho dikan-teny vaovao amin'ny HTML5.
Mandritra izany fotoana izany, avelako aminao ny rohy mankany amin'ny lahatsoratra hafa momba ny maodely ho an'ny HTML5 sy CSS3 mba hahafahanao manao fanazaran-tena mandra-pivoaka ny dikan-teny farany. Manantena aho fa nahasoa anao ity lahatsoratra ity ary afaka nahatakatra tsara kokoa ny atao hoe HTML6 ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inona no atao hoe html6?